Vaovao - Manidina adala katsaka ny kisoa sy atody, mijanona tsy milatsaka intsony ny tsenan'ny asidra amine
Ny kisoa sy ny atody dia manidina adala katsaka, mijanona tsy milatsaka ny tsenan'ny asidra amino
Rehefa mihaona ilay virus vaovao misy satroboninahitra vaovao ary mihoatra ny tinady ny famoahana, tato anatin'ny volana vitsivitsy, dia asidra amainina misy fermenta maro no nianjera avy teny an-tampon'ny tendrombohitra ka hatrany ambanin'ny lohasaha, toy ny lysine, threonine, tryptophan, valine , sns.), raha nandroso hatrany ny katsaka, dia nirongatra be. Orinasa asidra amino dia nijaly mafy noho ny vidiny sy ny vidiny tamin'ny lafiny roa. Ho fanampin'ny vanim-potoana fikojakojana ny maripana dia nidina ny tahan'ny fiasan'ny orinasa ary nitombo ny isan'ny mpanamboatra izay tsy manao tatitra intsony sy mampiakatra ny vidiny. Natomboka indray ny fiompiana an-trano. Tsara, ny tsenan'ny asidra amine dia nijanona tsy nianjera ary nangona tamin'ny faran'ny volana, ary nihatsara ny fividianana sy ny varotra. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny lisisy 98% dia RMB 7-7.5 / kg, ny vidin'ny methionine dia RMB 18-19 / kg, ny vidin'ny threonine dia RMB 8-8.5 / kg, ary ny vidin'ny tryptophan dia RMB 43.5 -46 / kg.
Mampitsahatra ny famokarana ny mpanamboatra ary mitatitra vaovao tsy tapaka
Varotra varimbazaha miisa folo misesy mifanesy no nahita fifanakalozana avo lenta sy fiakarana lafo. Mafana ny tsenan-katsaka, miaraka amin'ny fiakarana mihoatra ny 100 yuan isan-taonina hatramin'ny fiandohan'ny volana. Ny salan'isa eo an-tsena ankehitriny amin'ny 2275,26 yuan / taonina dia tafakatra amin'ny toerana avo indrindra tao anatin'ny dimy taona. Nanaraka izany ihany koa ny sakafo soja. Tamin'ny fiandohan'ny volana, dia nitombo 200-300 yuan / taonina. Ny katsaka dia akora ilaina amin'ny asidra amainina misy masirasira toy ny lysine, threonine, ary tryptophan. Ireo orinasan-tsolika lalina dia manohy mampiakatra ny vidin'ny fividianana, ary ny orinasan-tsakafo dia nampitombo ny vidiny noho ny fitaovana lehibe sy ny solony. Ny fiakaran'ny vidiny dia teo anelanelan'ny 50-100 yuan / taonina. Ny fangatahana fanitarana ny fahaizan'ny asidra amine amin'ity taona ity dia marefo, ny mpivarotra dia mivarotra entana, ny mpanamboatra manapaka ny vidiny hampiroboroboana ny fifanakalozana, ny fihenan'ny famatsiana hampihena ny fatiantoka ary ny fanamorana ny faneren'ny lisitra
Fanatsarana ny fanarenana ny fambolena any an-toerana
Ny felam-boninkazo dia maniry any atsimo amin'ny tapaky ny volana jolay, ary nihena ny toe-draharaha tamin'ny faran'ny volana. Tamin'ity volana ity, nihatsara ny fahombiazan'ny fiompiana akoho, ny akoho sy ny atody, ary ny vidin'ny kisoa. Raha tena Tailai dia very ny atody efa ho antsasaky ny taona. Miditra amin'ny dingana mihombo, niakatra tsikelikely ny vidin'ny atody tamin'ny volana Jolay, ary ny mpivarotra atody namadika tombony ho tombony. Raha ny angon-drakitra momba an'i Huitong, tamin'ny 31 Jolay, ny vidin'ny atody dia 8,05 yuan / kg, fiakarana 70% hatramin'ny fiandohan'ny volana. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, ny tondra-drano dia niteraka loza 33,85 tapitrisa tany amin'ny faritany 27 (faritra mizaka tena sy tanàna) misy an'i Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Chongqing, Sichuan, Guizhou, sns. goavambe, ary ny fanatsarana kisoa anatiny dia mihatsara hatrany. Raha ny fanaraha-maso 4000 voafaritra tamin'ny minisiteran'ny Fambolena sy ny tontolo ambanivohitra dia nitombo nandritra ny 5 volana nisesy ny tahiry kisoa sy ny famafazana.
Fehiny: mihena ny famatsiana, lafo ny vidiny, mitombo ny fihetsiky ny mpanamboatra ny vidiny, ary voafehy tsara ny valanaretina anatiny. Ny mpikaroka sasany dia milaza fa mety hisy vaksiny hampiasaina amin'ny lohataona manaraka, mihatsara ny fanjifana indostrian'ny fikarohan-tokantrano, miverina tsikelikely ny indostrian'ny fiompiana anaty akondro ary miakatra ny vidin'ny sakafo soja. Manaraka ny fangatahana asidra amine, ny tsena dia nijanona tsy nianjera ary nihatsara, ary ny tsena dia nilamina ary nahavita be. Na izany aza, mbola mafy ny fianjadian'ny valan'aretina vahiny, miaraka amin'ny tranga vaovao 200 000 isan'andro. Anisan'izany, Etazonia, Brezila, India, Rosia, ary Afrika atsimo dia henjana indrindra. Mbola marefo ny fangatahana any ivelany, ary nameno ny tahiriny ny ankamaroan'ny orinasa an-trano, nanakana ny fihemoran'ny tsena.
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm, 73-32-5 L-Isoleucine, Sakafo biby, Kilasy Sakafo L-Threonine, Farm kilasy L-Leucine,